Lohany amin'ny fanaovana fahadisoana
Fantatsika fa maro tokoa ny zavakanto sy ny foto-pisainana eto amin'ity tontolo misy antsika ity no tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Maro no milaza fa tsy tokony handinika lalina izany lohahevitra izany akory ny Kristianina. Tokony ho amim-pahamalinana tsara no hiheveran'ny Advantista mitandrina ny Andro Fahafito ny asa fivelomany, ny toerana falehany, ary ny zavatra fihainony sy fijeriny.
Omena torolalana mazava isika ao amin'ny 1 Tim. 6 momba ireo toetra ratsy tokony hialana; manome antsika fanazavana maro mikasika izany koa anefa io toko io. Ao amin'ny 1 Tim. 6:9,10. Inona ireo zavatra tsy tokony hatao izay ampitandreman'i Paoly antsika?
Vakio ny tohin'ny 1 Tim. 6. Inona kosa ireo zava-dehibe asain'i Paoly katsahintsika?
Mariho fa mampitandrina i Paoly ao amin'ny 1 Tim. 6:20 mba hialantsika "amin'izay atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy". Mbola azo ampiharina tsara izany fitsipika izany na dia ao anatin'ny tontolon-kevitra hafa aza no iresahan'i Paoly eto. Izany hoe, saino ny amin'ireo hevitra, fampianarana, sy foto-pinoana rehetra, tsy amin'izao fotoana izao ihany fa teo amin'ny tantaran'ny taranak'olombelona manontolo, izay diso tanteraka.
Nandritra ny 2000 taona teo ho eo no ninoan'ireo olona lalin-tsaina indrindra teto ambonin'ny tany, sy ireo manam-pahaizana, fa tsy mihetsika eo afovoan'izao tontolo rehetra izao ny tany, ary manao faribolana manodidina azy ny kintana sy ny planeta. Matematika sy siansa lalina indrindra no nampiasaina hanohanana izany hevitra izany, kanefa hita fa saika diso amin'ny lafiny rehetra mihitsy izany. Noho izany, azontsika lazaina fa lohany amin'ny fanaovana fahadisoana ireny manam-pahaizana ireny, ary inoana fa "atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy" izany fampianarana izany.
Ny siansa ankehitriny, ohatra, dia milaza fa an'arivony tapitrisa taona lasa izay no nipoiran'ny aina, vokatry ny kisendrasendra, tsy nisy Andriamanitra namorona na nokendrena ho amin'ny tanjona manokana. Nandritra izany fotoana izany dia niavosa izaitsizy ny fikarohana ara-tsiansa, izay sarotra sy be tsipirian-javatra, mifototra amin'izany fampianarana izany. Araka izany, tsy handray lesona ve isika fa mety ho lohany amin'ny fanaovana fahadisoana tokoa ny olona? Tokony hisy akony eo amin'ny fanabeazana kristianina ankapobeny, indrindra eo amin'ny fampianarana ny siansa, ny fahafantarana izany; amin'ny fomba ahoana?